Abakhiqizi izimonyo zokuhlobisa njalo konakalisa emisha yethu - entsha Mascara ibhulashi eyinkimbinkimbi, le concealer ne umphumela ezinye ezintsha, ukuthi umgubuzelo. Nemigubuzelo - kuyinto efana powder, kuphela kungekho nto enemibala emihle futhi ngokuvamile, ne umphumela kukhanya noma kulokolokoza.
Abanaso ukufihla ukukhubazeka sobala kwesikhumba, ngeke kusize nge oily T-zone - basuke ngokuvamile abanconywa for isikhumba oily, bona ugcizelele ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe nobuso ubukeka sibi kakhulu kunalokho okuboniswa ngaphandle kwabo ... Basuke ngiyajabula ukuba isikhumba enhle futhi ehlanzekile.
Umenzi is Positioning emkhathini njengoba imfihlo yomuntu enhle, umuntu ekhaveni.
Yini ngempela lena akuyona indlela eshibhe. Lokhu, njengoba kushiwo ngenhla, iveli ebusweni. It is esisinikwa ngesimo ubuhlalu, ubuhlalu icwecwe icwecwe futhi elula. Ukunambitheka nombala, njengoba besho. Ekhuluma umbala. Ngo iqoqo unomphela, kukhona ngemibala emithathu - lena zakudala, pink and beige.
01 Mythic - zakudala futhi ngokomlando ngqa yokusakaza. Uphelele abanikazi isikhumba ugodo, okwakumenza zobumba yasendulo efana nonodoli yayihambisana. Shining ingezwakali yabo, cishe opaque.
02 Pink Fresh - njengokusikiselwa kwegama, lezi amabhola nge pink sombala oqavile. Emkhathini Gerlen umthunzi inikezwe ingasetshenziswa njengendlela othi awube, futhi njengoba umgubuzelo langempela.
03 Beige Chic - futhi igama elikhuluma - beige, amabhola segolide kuyovama lezi emkhathini. Ziyakwazi efanelekayo ubuhle abanebala elinsundu, kanye namantombazane abanesikhumba esimhlophe. It kubhekwa enemisebenzi kunazo zonke ithoni.
Futhi minyaka yonke kusukela emkhathini Guerlain olusha nge shades entsha e elinganiselwe.
Kakade amabhola no- sombala ogxile obomvu, isiliva, version ebusika, bronzer emkhathini, zobumba kanye nabanye abaningi.
Guerlain emkhathini: libuyekeza abanikazi. Girls zihlukaniswe ngezigaba ezimbili ezibanzi ngokuvumelana nobudlelwane phakathi kwalo mkhiqizo. Abanye bakholelwa Guerlain emkhathini kusuka sadlala imali futhi bakhethe a nozakwabo ethengekayo - okuhle, eziningi zazo. Kodwa abanye bakholelwe amabhola magic futhi wawo kufanele ube. Njengoba wazi, abanye nemigubuzelo ukunikeza kukhanya rougher, bengesibo ezifana fake kutsho njengoba emkhathini Guerlain.
Qaphela futhi abalandeli amabhola ukuthi umuntu eba okuchachambile ngaphezulu ngisho wadala umphumela Photoshop. Kodwa bangeke bakwenze kuyadabukisa, ngoba amantombazane nge isikhumba oily - isimangaliso kuzokwenzeka futhi ngeke bakwazi ukuguqula isikhumba sabo.
Nokho, labo awanandaba ngesikhumba, kubalulekile ukwazi izinto ezithile. Ngokwesibonelo, indlela ukusebenzisa emkhathini Guerlain. Amanye amantombazane inflict kubo ebusweni wonke umuntu - kodwa-ke kufanele niqaphele ukuba niyigcine likukhumbuza samovar ophucuziwe. Ukucinga nge yimuphi umkhiqizo - kungcono embi. Ngingaluleka ukuze ubafake esihlathini - engxenyeni engenhla babo, amathempeli, emabunzini kwesilevu. Ungakwazi agcizelele impumulo yakho, kokuba ibhulashi elincanyana phezu sinuses.
Isikhumba kufanele kube shiny, kodwa hhayi ukukhanya.
Amantombazane amaningi ungathandi "bomdabu" ibhulashi, abakholelwa kuba soft kakhulu. Nokho, uma ibhulashi kuyinto stiffer, kungaba sithole okuningi inkungu ebusweni uyobheka amabi.
Badinga ukusebenzisa zakamuva - lapho wonke is simaskwe. Uma umuntu akadingi isisekelo zangaphambi isicelo, bese zisebenza amafutha okuthambisa - emkhathini kungenzeka isikhumba kancane eyomile.
Ungesabi uma ngabe ukhethe ithoni akaphenduli - ungakwazi zizame isibalo amabhola - uma umuntu pink kakhulu, isibonelo, ususe pink ubuhlalu ambalwa. Uma une inkinga okuphambene - akukho nomthelela umkhiqizo, kusho ukuthi i-ungqimba zokuzivikela akayekiwe ne amabhola futhi une ukuwuhlanza. Indlela ukukwenza - Shake kancane iphakethe - futhi kungcono ukukwenza kaningana ngosuku.
Ekugcineni, mina uqaphele ukuthi, naphezu inani layo - (1500-1800 ruble leqoqo unomphela), abalandeli kulezi amabhola magic usuku ngalunye oludlulayo ezingasho.